Waxa aad hurtaa 30 daqiiqo si aad… – Garanuug
Home / Qoraallo / Waxa aad hurtaa 30 daqiiqo si aad…
admin October 7, 2015	Qoraallo, Waxbarasho, Waxqoris Leave a comment 6,518 Views
Earl Nightingale waxa uu baadhayay iskuna taxallujiyay guusha muddo tobanaan sanno ah, si dhab ahna waa uu u gudanayay shaqadiisa. Waxqabadkiisii inta u badan haddeer waa la iska illaaway, balse haddii aad in uun meel ku aragtid, waa kuwo u qalma in waqti la gesho ee ha sii dayn. Aniga aad ayaa ay ii caawiyeen.
Waa suure in ay qaadato ammin ka badan lix bilood marka la dersayo cilmiyada kakan, balse soddon daqiiqo oo maalinle ah – waa haddii aad si niyad ah aad maalin kasta u baratid’e – waa waqti BADAN oo diiraddu meel keliya haysato.
Tan micnaheedu waa in aad awood u leedahay in aad dhahdid “maya”. Ta micnaheedu waa in aad oggolaan kartid xaqiiqada ah in dadka kale u diran yihiin niyadjebintaada. Waa in aad samayn kartid waxa aad isleedahay waa sax, adiga oo aan sidaa u eegayn diidmada dadka ee taxanaha ah.
Ka dibna marka ay jaallayaashayda shaqadu suuqa aadaan anigu guriga ayaa aan tegayay. Waa aan dhoola-caddaynayay, waxa aanan u sharxay in aanan cabbitaan (khamri) ujeedin hawlo badan oo ay tahay in aan qabtana ay i sugayaan. Xilliyadii hore madaxa ayaa ay ka ruxi jireen, (walaac muujin darteed), balse aakhirkii waa ay iskala qabsadeen oo waa ay iga joojiyeen wayddiimihii.
Tayada eego, tirada dan iyo deero toona ha ka gelin. Iska illow akhrinta bogag cayiman maalintii. Taasi waa gef. Hubi in waxa aad akhriyaysid aad fahmaysid – tan oo keli ah ayaa raandhiis leh.
Badiyaa is-ag-dhig xaashi iyo qalin. Ku qor walxaha aad u baahato in aad hubisid. Ku dhig aragtiyaha kale ee kugu soo dhaca marka aad wax-akhriyaysid. Qor fekradaha loo adeegsan karo waxan aad akhriyaysid.
Marka aad sidaa uga fara-xalato buug (warside ama wax kale), dib u jalleec qabyo-qoraalladii aad ka samaysay, ka dibna kaydso wixii waxtar kuu yeesha, (in aad kambayuutarkaaga ku kaydsato ayaa aan weliba kugula talinayaa, haddii aad leedahay).
Gaadh go’aanno wanwaangsan, carqalahada ha u istaagin, kuna soco.
talo waxbarasho	2015-10-07
Tags talo waxbarasho
Previous Abaalmarinta Nobeelka (Nobel Prize)
Next Taariikhda Calanka Soomaaliya